သွေးတိုးဆေးဝါးများ - Aprilပြီလမှာလူကြိုက်အများဆုံးဆေးညွှန်း - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း နှိပ်ပါ ပြင်းထန်သောအားကစား မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဖျော်ဖြေရေး
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> Cပြီလတွင် SingleCare တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးများ
အအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးဆေးဝါးများသည်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးညွှန်းများစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးရောက်လိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည် ဇန်နဝါရီလ ဒါမှမဟုတ် ဖေဖော်ဝါရီလ SingleCare အပေါ်တစ်နှစ် -to- တစ်နှစ်။ ဆောင်းရာသီဆွဲလာသည်နှင့်အမျှဗီတာမင် D ဆေးညွှန်းသည်လူကြိုက်များသည်မှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ မတ်လ ။
Aprilပြီလကော။ သူတို့အားနွေ ဦး ဓာတ်မတည်များအတွက်ဓာတ်မတည်ဆေးများ? တုပ်ကွေးရာသီမတိုင်မီနောက်ဆုံးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်အတွက် Antivirals? သင်၏အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်ပြပြီးနောက်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရန် Meds?
ဒါကနောက်ဆုံးအမျိုးအစားအမှန်တကယ်နီးစပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ 2019 Aprilပြီလအတွက် SingleCare ရဲ့ဆေးညွှန်းကဒ်ကိုအသုံးပြု။ ဖြည့်ထိပ်ဆုံးဆေးညွှန်းအားလုံးသည်သွေးတိုးရောဂါကုသရန်အသုံးပြုအားလုံးသွေးဖိအားဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သွေးတိုးခြင်းအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဆေးမှာအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် SingleCare ၏ဆေးညွှန်းအချက်အလက်အရ၊
လိုင်နိုနို (ယေဘူယျ Prinivil) သည် angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitor
Losartan ပိုတက်စီယမ် (ယေဘုယျ Cozaar)၊ angiotensin II receptor blocker (ARB)
Lisinopril-hydrochlorothiazide (generic Zestoretic)၊ ACE inhibitor နှင့် diuretic ပေါင်းစပ်မှု
Clonidine HCl (ယေဘုယျ Catapres) တစ်ခု alpha-2-agonist
Losartan ပိုတက်စီယမ် - hydrochlorothiazide (ယေဘုယျ Hyzaar)၊ ARB ပေါင်းစပ်မှုနှင့် diuretic ဆီးချိုရောဂါ
သငျသညျအံ့သြနေလျှင်, အဘယ်ကြောင့်သွေးတိုးရောဂါဆေးဝါးများ? ဤအချက်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ - အမေရိကန်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့၏အဆိုအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူပေါင်း ၁၀၃ သန်းသည်သွေးတိုးရှိသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ပုံမှန်အကွာအဝေးသို့ဆင်းသက်ကူညီရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်သူတွေကိုအများကြီးပါပဲ။
Ikon Health မှဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်သော MD Leann Poston ကလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထက်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသောလူများတွင်အမှန်တကယ်ရှိနေသည်ဟုထောက်ပြသည်။ ဒါပေမယ့်ကြောင့်ပါပဲ အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်သွေးတိုးရောဂါ၏အဓိပ္ပါယ်မကြာသေးမီကပြောင်းလဲသွားတယ် , ဤအမျိုးအစားသို့ပိုပြီးလူ ဦး ဆောင်။
American Heart Association နှင့် American Cardiology College မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လမ်းညွှန်ချက်များသည်အရွယ်ရောက်သူအားလုံးအတွက် 140/90 Hg အောက်ရှိသွေးပေါင်ချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရည်မှန်းချက်ကို 130/80 Hg အောက်သို့လျှော့ချရန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
SingleCare ကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားသူများသည်လွန်ခဲ့သောpresပြီလကဆေးကုသမှုခံယူရန်ဆေးညွန်းစာများစွာကိုဘာကြောင့်ဖြည့်တင်းရသလဲဆိုသည့်အချက်သည် SingleCare ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သော Pharm.D မှ Kristi Torres ကသူတို့၏အာမခံအစီအစဉ်များနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုထင်မြင်သည်။
လူနာအများစုသည်မြင့်မားသောနှုတ်ယူနိူင်သောအစီအစဉ်များရှိကြသည်၊ ဆေးဝါးသမားများအနေဖြင့်တတိယပါတီမှပေးဆောင်သူများသည်များသောအားဖြင့်စျေးသိပ်မကြီးသော၊ ယေဘူယျသွေးပေါင်ချိန်များသည့်ဆေးများမှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လူတွေအနေနဲ့သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးစျေးကိုရှာရန် SingleCare ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားကြတာပါပဲ။
အလုပ်တွင်ဒေါက်တာ Torres သည် ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers နှင့် beta-blockers များအတွက်ဆေးညွှန်းတောင်းဆိုမှုများကိုပုံမှန်လက်ခံသည်။ ဒီဆေးတွေကိုလူသိများပြီးယေဘူယျအားဖြင့်ဆေးသမားတွေကသူတို့ကိုဆေးညွှန်းတွေအများကြီးပေးလေ့ရှိတယ်။
သက်ဆိုင်သော: ACE inhibitors vs. beta blockers - ဘယ်သွေးဖိအားကိုသင့်အတွက်ပေးသင့်သလဲ။
သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသောက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။ မထိန်းချုပ်နိုင်သောမြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်သည်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောဆိုးရွားသည့်အဖြစ်အပျက်များအတွက်သင်၏အန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှလုံးရောဂါခံစားခဲ့ရသော ၅၀% ခန့်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးလေဖြတ်ခြင်းခံရသောလူများ၏ ၆၆% သည်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်သည်ဟုဆိုသည် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC),
သင်၏နံပါတ်များကိုသိခြင်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုသူကဆိုသည်။ ထို့အပြင် American Heart Association ၏အဆိုအရဤဆေးဝါးမဟုတ်သောဆောင်ရွက်မှုများသည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန် [၅% မှ ၁၀%] အထိရှိခြင်း၊ သင်အဝလွန်နေလျှင်သို့မဟုတ်အဝလွန်နေလျှင်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်အတူဖြည့်စွက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့ (အမျိုးသားများအတွက်) တစ် ဦး (အမျိုးသမီးများအတွက်) နှစ်ခုသို့မဟုတ် (အမျိုးသားများအတွက်) မှအရက်ကန့်သတ်။
သင်သောက်နေသည့်ဆေးဝါးများအကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်သင်အချိန်အနည်းငယ်ရသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုပုံမှန်အကန့်အသတ်အတွင်းထားရှိရန် lisinopril ကဲ့သို့ဆေးကိုသောက်သုံးသူများစွာထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်သင်အကျွမ်းတဝင်ရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဒေါက်တာ Torres က lisinopril နှင့်အခြား ACE တားစီးသူများကသူတို့ကိုများသောအားဖြင့်ခြောက်သွေ့။ ပြင်းထန်သောချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာလျှင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြသနိုင်သည်။ losartan လို ARB လိုမျိုးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုအကြံပြုနိုင်လိမ့်မည်။
သင့်ဆရာဝန်မှမည်သည့်ဆေးအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါစေသင်အကောင်းဆုံးစျေးကိုရရှိရန်သေချာစေရန် singlecare.com ရှိစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
Tramadol vs. oxycodone: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
သွေးတိုးရောဂါသက်သာရန် apple cider vinegar မည်မျှသောက်ပါသနည်း
ပင်နီဆီလင်မှ yeast ပိုးကူးစက်နိုင်ပါသလား